> Resource > Beddelaan > Sida loo rogo ama MTS in DV
Haddii aad qabtaan wax badan oo la yaab leh files MTS / M2TS footages qoro daqiiqado qaaliga ah sida dhalashada, xafladda arooska, qaab ciyaareed cajiib ah, iwm, waxaa laga yaabaa in aad u badan tahay in la tixgeliyo si aad u macno leh oo iminka ay qalab video tafatirka xirfad sida iMovie, Final Cut Pro, Adobe-jilitaankii, iwm Si kastaba ha ahaatee, in inta badan dacwadaha, waxaa laga yaabaa in aad ku guul darreysato inay iyaga soo dhoofsadaan. Sababtu waxa weeye qalab video-tafatirka xirfad sida inta badan xamili footages ka DV, MP4, iyo MOV iwm ma siin taageero fiican u files MTS.
Si aad si guul leh ku keeno files MTS / M2TS, in aad marka hore iyaga waa in loogu badalo in ay qaab saaxiibtinimo, kuwaas oo MOV, MP4, ama qaab DV. Marka la barbar dhigo MP4, MOV (encoded la inter-loox), DV bixisaa videos la intra-loox, oo leh xiddaayad kasta isagoo iyagoo sawir is-jira ah. Oo sidaas ha loo si fudud Decoded karaa in image ah oo ka hawl tafatirka. Sidaa darteed, diinta MTS u tafatirka ujeeddada, qaabka DV waa doorashada ugu fiican ee .Waxaa tutorial bixisaa workaround fudud si loogu badalo MTS inay si fudud oo dhaqso dhibaataynta qoyska la xirfadeed iyo dareen Wondershare Video Converter u Mac . Fadlan akhri oo ku saabsan si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Fiiro gaar ah: MTS Tani dhibaataynta qoyska Converter u Mac (Mountain Libaaxa ka mid ahaa) ma badalo karaa oo kaliya MTS dhibaataynta qoyska, laakiin sidoo kale loogu badalo MTS in MP4, MTS in MOV, iyo Macdan audio ka MTS, iwm Hagahan qaadataa Screenshot Mac, haddii aad ' dib u ordaya Windows OS, fadlan eeg User Guide in Windows .
1 Import MTS files si MTS in ay Converter DV
1) Click "File"> "Add Media Faylal ay" si ku shuban ah MTS videos aad rabto in aad si loogu badalo.
2) Si fudud u jiidi jeedi MTS videos barnaamijka.
Laakiin haddii aad files MTS ayaa fiidiyo, waxaad iyaga si toos ah u soo dhoofsadaan karaa qalabka. Just furaysto aad fiidiyo galay Mac, ka dibna, ordo software this, dooran faylasha aad rabto, iyo ugu dambaysta, ku dhacay "Load" fursad u dhoofsadaan. Ka dib markii dhammaan faylasha waxaa lagu keeno, waxaad hagaajin kartaa amarka, la badalo magaca wax soo saarka, iyo iyaga ku eegaan.
2 Dooro qaab wax soo saarka
Calan "DV" sida qaab saarka adigoo gujinaya qaab icon ka dibna dooro "Video"> "DV". Ka hor inta MTS dhibaataynta qoyska diinta, waa ikhtiyaari in astaysto aad videos by falinjeeerka qaybo rabin, lana siii ku laayeen madow, biirtay video clips ka mid ah galay, iwm Waxaad samayn kartaa video kaamil ah Jidkan.
Dhanka kale, waxaad dooran kartaa presets ee iMovie, oo Final Cut Pro ka Apple Software, oo sida caadiga ah ka shaqeeya weyn oo heer sare ah socon.
3 bilow si loogu badalo MTS in DV
Marka aad xaqiijin wax walba u dhacaan sidii aad qorshaynayso, riix " Beddelaan ". Bar horumarka ayaa ku tusi processing qaab beddelidda doonaa. Markaas hambalyo! Waxaad dajiyaan karaa faylka diinta iMovie, Final Cut Pro ama Adobe jilitaankii Pro dhowr ilbiriqsi gudahood.
U fiirso mar kale: Haddii aad tahay dadka isticmaala Windows, isku day MTS in DV Video Converter for Windows (taageertaa Windows 7 / XP / Vista) la isku tallaabooyin.
Ku raaxayso markii la iMovie, Pro Goo Final, iwm si ay u abuuraan aad masterpiece!
Beddelaan MTS in AVI : Wondershare Converter MTS u Mac kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo MTS in wax audio / video qaab ama qalab iwm